Chikumi 10, 2018 arun
Crypto mirayiro zvakaziviswa muThailand
The Thai kuchengetedzeka uye Exchange Commission vakazivisa mashoko munyika cryptocurrency mitemo. The matanho akanga achibvumirana panguva regulator wacho June 7th musangano, uye vanotarisirwa kupinda kushanda gare gare mwedzi uyu.
Maererano SEC Mutevedzeri munyori mukuru Tipsuda Thavaramara, ari SEC achabvumira Bitcoin uye Litecoin kuti nhumbi somunhu wokutengesera peya, pakati vamwe.
"Vamwe huru nzira yaishandiswa SEC kuongorora cryptocurrency zvokutengeserana nomwe" dziri "Kubvumirana kutendeseka uye cryptocurrency liquidity."
Nesilicon Valley kuti Top Dental Practice Inotanga Uchibvuma Dentacoin, ari Dental Cryptocurrency
Shine Dental - pamusoro mazino tsika nesilicon Valley raMwari, vachishandisa Fremont, California - akatanga pakutevedzera Dentacoin, ari digitaalinen nemari dentistry, senzira mubhadharo.
Shine Dental kuti mutungamiri Dr. Swapna Raveendranath aikudzwa ane richangopfuura mubayiro nokuda Best Dentist mudunhu, zvichitevera "Zvakanakisisa Fremont Reader kuti Choice" makwikwi mu 2016. Naye mutsva kutanga dzika cryptocurrencies vake tsika, Dr. Raveendranath ndehwokuti kuramba naye rwendo kuenda "kutarisira ose murwere munharaunda" uye dzinovapa pamusoro unhu, kutengeka uye svikika mazino hanya. The kiriniki iri kutarisira kuwedzera Kudyidzana wayo Dentacoin uye kushandisa zvizere kwadzo.
Dr. Swapna haagumiri ipapo zvazvo, sezvo iye ari iyewo mumabasa vakanaka, pamwe Scholar Award Program, kuva kwake kupfuura achangodarika chirongwa. Rinopa vakasununguka-of-mutariri hwose mazino uchenjerere vadzidzi, Ukuru muchikoro, asi asingakwanisi wemasaini nokuda inishuwarenzi mazino, nokuda kwezvikonzero zvemari.
Zvinobatsira digitaalinen dzeEurope kwakaita vazhinji mabasa mazino kutarisirwa kutora ichi nzira itsva mubhadharo. Dental Makiriniki vava cryptocurrency kubhadhara akashuma kudavira foni kubva zvose pamusoro US. Tichifunga izvi uye mupata wacho Tech-savvy revanhu, Shine aigona nyore Dental akava mukuru nzvimbo mazino kurapwa kuti caters nezvechikamu ichi chaiyo vateereri.
Shine Dental inobatanawo Dentacoin Network pamwe makumi maviri mamwe mazino tsika pasi pose, yaiva USA, Ositireriya, UK, Itari, Netharenzi, Hangari, Bharugeriya, Sebhiya, Marazhiya, Taiwan, Pakisitani, Fiji, India.
Kraken Daily Market Mushumo 09.06.2018
$52.6M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Next Post:Ose wechitatu German inokurukura cryptocurrencies ive mubhizimisi
Angelyn Yaklich anoti:
Chikumi 20, 2018 pa 3:26 AM
Deandrea Niswander anoti:
Chikumi 23, 2018 pa 10:51 AM